सुमन सागाको ब्रान्ड एम्बासडर » Mero Khel कराते
१३,माघ,२०७७ ( Tuesday, January 26, 2021 ) 4: 42 pm
MeroKhelPosted on १५,पुष,२०७७ December 30, 2020 ४ हप्ता पहिले
काठमाडौ । गोंगबु नयाँ बसपार्कस्थित सागा एडभेन्चर टुर्स एन्ड ट्राभल प्रा.लि. ले कराते खेलाडी सुमन तिमल्सिनालाई बुधबार ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त गरेको छ । सागाका प्रबन्ध निर्देशक स्वच्छम गुरुङले सुमनलाई सो सम्बन्धी नियुक्ती पत्र एक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गरे ।
त्यस वापत सागाले सुमनलाई विदेशमा हुने कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालगायतका खेलकुद कार्यक्रममा सहभागी हुन निशुल्क हवाई टिकट उपलब्ध गराउने भएको छ । दुवैबीच एक वर्षका लागि सम्झौता भएको प्रबन्ध निर्देशक गुरुङले जानकारी दिए ।
‘नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा धेरै सफलता पाएका छन् । थुप्रै खेलाडीले आर्थिक अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाएको हामीले सुनेका छौं । हाम्रो यो कदमले थारै भएपनि खेलाडीलाई राहत मिल्ने छ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले हामीले उहाँ (सुमन) बाट सुरुआत गरेका हौं ।’ प्रबन्ध निर्देशक गुरुङले भने– ‘आगामी दिनमा अन्य खेलाडीलाई आफ्नो संस्थाको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने छौं । देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने प्रमुख माध्यम खेल क्षेत्रसंग जोडिन पाउँदा असाध्यै खुशी लागेको छ ।’ उनले अन्य खेलाडीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ टिकटमा विशेष छुट दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सुमनले ब्रान्ड एम्बसडरमा नियुक्त गरेकोमा सागालाई धन्यवाद दिदै सागाको प्रवद्र्धनमा आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘ए’ श्रेणीको अन्तर्राष्ट्रिय जज समेत रहेका सुमनले खेलाडीका रुपमा विभिन्न देशमा १८ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका छन् । त्यसमा उनले बंगालादेश र श्रीलंकामा भएको प्रतियोगितामा स्वर्ण तथा मलेसियामा भएको प्रतियोगितामा कांस्य जितेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः त्रिभुवन आर्मी क्लबले पायो एएफसी क्लब लाईसेन्सको आधिकारिक प्रमाण पत्र
Tagsadventure tours and travels pvt.ltd brand ambasador buspark gangapu new buspark saga adventures and tour pvt.ltd एडभेन्चर टुर्स एन्ड ट्राभल प्रा.लि. गोंगबु नयाँ बसपार्क ब्रान्ड एम्बासडर
Previous Postप्रधानमन्त्री कप : प्रदेश नम्वर एक सेमिफाईनलमा प्रवेशPrevious Post
Next Postत्रिभुवन आर्मी क्लबले पायो एएफसी क्लब लाईसेन्सको आधिकारिक प्रमाण पत्रNext Post
MeroKhelPosted on १२,माघ,२०७७ January 25, 2021 २२ घण्टा पहिले
एनएनआइपीए स्पोर्टस अवार्ड फागुनको पहिलो साता
हेटौंडामा फागुन ५ गतेदेखि मेयरकप फुटबल प्रतियोगिता
Home>मार्सल आर्टस्>कराते>सुमन सागाको ब्रान्ड एम्बासडर